के–डटदेखि पुलित्जरसम्म- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
‘केन्ड्रिक आफू कहाँबाट आएको हुँ भन्ने बिर्सिंदैनन् । त्यसका लागि उनी माननीय छन् ।’
माघ २५, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — संगीतमा ग्रामी अवार्ड्स सबभन्दा प्रतिष्ठित मानिन्छ । यसको ६१ औं संस्करण आइतबार लस एन्जल्समा हुँदै छ र यसपल्टको मनोनयनमा मूलत: र्‍याप गीतको वर्चस्व छ ।
र्‍यापर केन्ड्रिक लमार सर्वाधिक आठ विधामा मनोनयनमा परेका छन् । उनीपछि ड्रेक, कार्डी बी, ब्वाई–वानडा, चायल्डिस ग्याम्बिनोजस्ता र्‍याप आर्टिस्टका गीत प्रमुख विधाहरूमा छानिएका छन् । यीबीच लोक–रक गायिका ब्रान्डी चार्ली पनि ड्रेकझै ६ वटा विधाको मनोनयनमा परेकी छन् ।
केन्ड्रिकले अघिल्लो अवार्डमा पनि पाँच वटा ग्रामी ट्रफी घर लगेका थिए । त्यो बेला उनको एल्बम ‘ड्याम’ सात विधामा मनोनयनमा परेको थियो । उत्कृष्ट एल्बम र उत्कृष्ट र्‍याप गीतजस्तो महत्त्वपूर्ण मानिने विधामा केन्ड्रिकले अवार्ड जितेका थिए । ‘हम्बल...’ गीतका लागि चर्चित र्‍यापर आनीबानीमा पनि हम्बल (विनयी) नै रहेको त्यो बेला बताइएको थियो । सिर्जनशील र सफल र्‍यापरका रूपमा उनको छवि निर्माण भइसकेको छ ।
केन्ड्रिकले सन् २०१६ देखि ग्रामी अवार्ड जित्दै आएका छन् । गत साल उनले संगीतका लागि पुलित्जर पुरस्कारसमेत पाए । ग्रामीमा पाँच वटा अवार्ड जितेको केही समयपछि नै उनले ‘ड्याम’ एल्बमका लागि पुलित्जर हात पारेका थिए । गैरशास्त्रीय वा गैरज्याज एल्बमले संगीतका लागि पुलित्जर पुरस्कार पाएको त्यो पहिलो घटना थियो । यसअघि सन् २०१६ मै टाइम म्यागजिनले केन्ड्रिकलाई विश्वका सय शक्तिशाली व्यक्तिभित्र समावेश गरेपछि उनी विख्यात बनेका थिए ।
केन्ड्रिकलाई यसपालि फिल्म ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ को साउन्ड ट्रयाकका लागि प्रशंसा मिलिरहेको थियो । ‘ब्ल्याक प्यान्थर: द एल्बम’ मा समाविष्ट ‘अल द स्टार्स...’, ‘प्रे फर मी...’ र ‘किङ इज डेड...’ बोलका गीत सर्वाधिक रुचाइए । यिनै गीतले उनलाई ग्रामीमा सबैभन्दा बढी विधामा मनोनयनमा पुर्‍याएको हो । काला जातिको पक्ष र विशेषत: अश्वेत महिलाप्रति सम्मान अभिव्यक्त गरिएको हुनाले ब्ल्याक प्यान्थर फिल्म र केन्ड्रिकका गीत जनप्रिय बनेको रोलिङ स्टोन म्यागजिनको विश्लेषण छ ।
क्यालिफोर्नियाको क्रम्पटनमा हुर्किएका केन्ड्रिक पहिले–पहिले के–डट (स्टेज नेम) का रूपमा चिनिन्थे । उनको खास नामचाहिँ केन्ड्रिक लमार डकवर्थ हो । सन् १९८७ मा जन्मिएका उनी १६ वर्षको उमेरदेखि औपचारिक गायनमा लागेका थिए । उनले चार वटा एल्बम निकालिसकेका छन् । केन्ड्रिकका प्रशंसकहरू उनलाई र्‍यापर मात्रै ठान्दैनन्, आफ्नो रचनामा विषयवस्तु उठान गर्न सक्ने र कथावाचनको राम्रो सीप भएका आर्टिस्टसमेत मानिन्छन् उनी ।
उनी पश्चिमी तटीय क्षत्रेका र्‍यापरहरूको समूह ‘ब्ल्याक हिप्पी’ मा आबद्ध छन् । आफ्ना गीतहरूमा अश्वेत जातिको कला झल्काउने भन्दै उनको तारिफ गर्ने एउटा जमात छ । केन्ड्रिकमाथि पुस्तक लेख्न लागेका पिचफोर्क मिडियाका लेखक मार्कुस जे. मुरका अनुसार केन्ड्रिक यस्ता र्‍यापर हुन् जसले अश्वेत जातिको संस्कृतिको सम्मान गर्न जानेका छन् । ‘उनी आफू कहाँबाट आएको हुँ भन्ने बिर्सिंदैनन्,’ मुरको भनाइ उद्धृत गर्दै बेलायतको द इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनले लेखेको छ, ‘त्यसका लागि उनी माननीय छन् ।’
यी र्‍याप स्टार डा. ड्रे र टुप्याकबाट प्रभावित छन् । डा. ड्रेको कम्पनीसँग त उनी आबद्ध नै छन् । दिवंगत टुप्याकप्रति सम्मान जनाउँदै गीत गाएका छन् । उनका बुबा ‘ग्याङस्टर डिसाइपल्स’ नामक अपराधी समूहका सदस्य भएकाले केन्ड्रिकले सानैदेखि हुलदंगा, मारपिट देखे तथापि उनी शान्त र नरम भएकामा प्रशंसकहरू इज्जत गर्छन् । लिल वाइने, जे–जेड र कान्य वेस्टजस्ता नामुद र्‍यापरहरूले एमटीभीबाट प्राप्त गरेको ‘हटेस्ट एमसी’ को उपमा केन्ड्रिकले समेत पाएका छन् ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ११:५५
ब्याकस्ट्रिट ब्वाइजको पुनरागमन
नयाँ एल्बम डीएनएका लागि नयाँ नै रणनीति अपनाएका छन् । अरु नाम चलेका केही ब्यान्डले जस्तै आफ्नो पछिल्लो एल्बमलाई टुरको टिकटसँग उपलब्ध गराएका छन् ।
काठमाडौँ — व्याकस्ट्रिट ब्वाइजले यो उपलब्धिका लागि साँच्चै २० वर्ष कुर्नुपर्‍यो, तर यो ब्यान्डको पुनरागमन आपैंmमा अद्वितीय भने छ ।
अहिले चारैतर्फ यही ब्वाई ब्यान्डको चर्चा छ । अब पनि यसलाई ब्वाई ब्यान्ड भन्न मिल्ला र ? पक्कै पनि ब्यान्डका सदस्यहरू पहिले जस्तो कहाँ कलिला युवा रहे र ? तर पनि ब्यान्डका गीत भने उस्तै छन्, युवा पुस्तामा केन्द्रित ।
कुनै समय थियो, जति बेला ब्याकस्ट्रिट ब्वाइजले खुबै तहल्का मच्चाएको थियो । फेरि यस्तै तहल्का मच्चाइरहेको छ । ब्यान्डले केही समय भयो, आफ्नो नयाँ एल्बम निकालेको, ‘डीएनए’ को नाममा । अहिले यही एल्बमले भर्खरै बिलबोर्ड चार्ट्समा नम्बर १ स्थान कब्जा गरेको छ । सन् २००० मा ब्यान्डको त्यति बेलाको एल्बम ‘ब्ल्याक एन्ड ब्लु’ यसरी नै नम्बर १ स्थानमा पुगेको थियो । आरसीआर रेकर्डले निकालेको अहिलेको एल्बम यो साताको सबैभन्दा बढी बिक्री हुनेमा पनि परेको छ । फेरि एकपल्ट अहिलेको युवा पुस्ताले पनि ब्यान्डप्रति उस्तै माया देखाएको छ ।
ब्याकस्ट्रिट ब्वाइज अर्थात् अमेरिकाको त्यो भोकल ग्रुप हो, जसका सदस्य हुन्, एज म्याकलिन, हो डोरोग, निक कार्टर, केभिन रिचर्डसन र ब्रायन लिटरेल । सन् १९९३ मा ब्यान्डको स्थापना भएको थियो, फ्लोरिडाको ओरलान्डोमा । यो कति पुरानो कुरा हो भने जति बेला ब्यान्ड बन्यो, त्यति बेला आई ट्युन्स भन्ने थिएन । हुँदा हुँदा अमेरिकन आइडल पनि सुरु भएको थिएन । ब्यान्ड बनेको दुई वर्षपछि त यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
अनि जति बेला ‘ब्ल्याक एन्ड ब्लु’ नम्बर १ भएको थियो, त्यति बेला भर्खरै सीडीको जमाना चलिरहेको थियो । सीडीकै बिक्रीको आधारमा त्यो एल्बम शीर्ष स्थानमा पुगेको थियो । अहिले नम्बर १ चयन गर्ने चलन पनि नयाँ भइसकेको छ । अहिले बिलबोर्डले स्ट्रिमिङ सर्भिसमा जुन गीत बढी क्लिक हुन्छ, त्यही अगाडि हुन्छ । यस्तोमा ब्याकस्ट्रिट ब्वाइजले आफ्नै आँखा गाडी ठूलै कालखण्डको यात्रा तय गरेको छ । समयको आधारमा यो कमै होला पनि ।
तर प्रविधिको आधारमा धेरै । ब्यान्डका पाँचै सदस्य अहिले ४० वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । उनीहरू पनि नयाँ एल्बम डीएनएका लागि नयाँ नै रणनीति अपनाएका छन् । बन जोभी र अरू नाम चलेका केही ब्यान्डले जस्तै ब्याकस्ट्रिट ब्वाइजले पनिआफ्नो पछिल्लो एल्बमलाई टुरको टिकटसँग उपलब्ध गराएका छन् । अर्थात् ब्यान्ड अहिले टुरमा निस्कने क्रममा छ । जसले त्यो टुरको एउटा टिकट किन्यो, उसले अब एल्बम पनि पायो ।
डीएनए आपैंmमा भने ब्यान्डको सातौं स्टुडियो एल्बम हो । रिलिज भएको दिन पनि भर्खरै भने हुन्छ, २५ जनवरी । एल्बमका प्रमुख गीतहरू ‘डन्ट गो ब्रेकिङ माइ हार्ट्स’, ‘चान्सेस’ र ‘नो प्लेस’ अहिले खुबै लोकप्रिय भएका छन् । ब्यान्डले आफ्नो टुर भने मे महिनाबाट सुरु गर्दैछ र पहिलो गन्तव्य रहेको छ, पोर्चुगलको लिस्वन । एल्बममा कुल १२ गीत छन् । टुरका क्रममा ब्यान्ड अझ चर्चामा रहनेछ र एल्बम फेरि बिक्रीमा अगाडि पर्नेछ । यो ब्यान्डको महान्् पुनरागमन नै हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ११:४१